नेपाली गायनमा धेरैले रुचाहेको नाम हो– गायिका सिन्धु मल्ल । उनका हरेक जसो गीत लोकप्रिय छन् । त्यहि लोकप्रिय गीत मध्येको एउटा गीत हो ‘चिटिक्कै भाछु रे ।’ यो वर्षको तीजका लागि म्यूजिक भिडियो निर्माण गरिन् । उबेलाको लोकप्रिय यो गीतलाई उनका स्रोता दर्शकले पुनः उस्तै माया दिए । गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छोटो समयमै युट्युव ट्रेण्डिङमा आउन सफल भएको छ ।
तीज आउन करिब डेढ महिना बाँकी छ, तर तीजका गीत बजारमा घन्किन थालिसकेको छ । रेडियो, टेलिभिजनका साथै युट्युब सामाजिक सन्जालहरू तीज गीतका भाका गुञ्जिन थालेका छन् । यद्यपि विगतको वर्षको तुलनामा यसपालि तीजगीतको रेकर्डिङ सुस्ताएको संगीतकर्मीहरु बताउँछन् ।
गायक सुगम पोखरेलको स्वरमा रेकर्ड भएको नयाँ गीत ‘लैजा हावा...’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त गीतमा राजन भुजेलको शब्द तथा संगीत सुन्न सकिन्छ । शैलेन्द्रमान प्रधान बाबुले उक्त गीतमा संगीत संयोजन गरेका छन् ।
जनक तिमिल्सिना, महेश तिमल्सिना , श्रावण ६, २०७६
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवको नाताले यो विवाद हल गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व मेरो हो । म त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु । जो विवाद समाधान गर्न चाहँदैनन्, अर्थात् विवाद उल्झाउनेहरूलाई क्रिकेटका अपराधी हुन भनेर घोषणा गर्छु म । त्यसपछि म अनुरोध गर्छु, यिनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरौं भनेर ।
 अरूले तानेको देख्दा आफूलाई पनि तलतल लाग्यो भने आफैंले आफूलाई ‘केही मिनेट ढिलो गर्छु’ भन्नुहोस् । यस्तो चलाखीले पनि चुरोटबाट बिस्तारै टाढा बनाउँछ ।
भीमबहादुर दाइको निजी जीवनका बारेमा थाहा पाउनैपर्ने त्यस्तो खास कुरा केही थिएन । एउटा सरल र सहज जीवन, जसका आवश्यकताहरू अत्यन्त सीमित थिए, सम्पत्तिको नाममा जोसँग देखाउनु र लुकाउनुपर्ने केही थिएन, जसका आशक्तिहरू थिएनन् र जसको कुनै पनि खराब आदत थिएन ।
कृष्ण भट्टराई, श्रावण १७, २०७३
अघिल्लो वर्ष २८ वटा भिडियोमा नृत्य गरेकी थिएँ, यसपटक आइतबारसम्ममा २६ वटा भिडियोमा काम गरें, अझै १० वटाजतिमा काम गर्दैछु ।
अघिल्लो बर्ष सफल रुपमा सम्पन्न भएको मिस नेपाल नर्थ अमेरिकाको दोस्रो संस्करण सुरु हुन अब धेरै समय बाँकी छैन । आयोजक अहिले कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि विभिन्न तयारी गरिरहेको छ ।यसै सन्र्दभमा मिस नेपाल २०१८ श्रृंखला खतिवडा ग्राण्ड फिनालेमा उपस्थित हुने भएकी छिन् ।
साप्ताहिक संवाददाता , कार्तिक १२, २०७४
 ग्रीन सलाद तथा हरिया तरकारीलाई प्राथमिकता दिन्छु । तेल कम प्रयोग भएका फ्रेसफुड खान्छु ।
हेटौंडामा जन्मिएर पूर्वको सुन्दर नगरी इटहरीलाई कर्मथलो बनाएकी रीता कट्टेल पूर्वाञ्चलमा भिडियो जक्कीमा रूपमा परिचित छिन् ।
ब्राजिलमा पछिल्ला केही वर्षदेखि कुन युवतीको पुठ्ठा आकर्षक भन्ने प्रतियोगिता आयोजित हुँदै आएको छ । पहिले ब्राजिलका युवतीहरूबीच मात्र हुने यो प्रतियोगितामा केही सहभागीले कृत्रिम ढंगले पुठ्ठा ठूलो बनाएर सहभागी हुने क्रम बढेपछि प्रतियोगिता नै स्थगित गरिएको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
समुन्द्रको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अझै पनि खोज जारी छ । रसियाका ३९ वर्षका रोमान फेडोर्टसोभ माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्छन् । उनी समुन्द्रको तल्लो भागमा पुगेर माछा मार्ने काम गर्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
नयाँ–नयाँ किसिमको रंग प्रयोग गरेर कपाल रंगाइएको भिडियो देखाउनु भन्ने जस्ता अनुरोध आएपछि लोरी पनि उत्साहित हुँदै गएकी थिइन्, जसका कारण उनले ब्लिचिङका लाइभ एपिसोड थप्दै लगिन् । यस क्रममा उनले लाइभ ब्लिचिङ कार्यक्रम चलाउँदा–चलाउँदै कपाल रंगिनुको सट्टा भएकै कपाल झर्न थाल्यो । पुरा पढ्नुहोस्
लिन्ड्सेले उक्त ड्रेसले आफ्नो गोप्य अंग देखाएको जनाउँदै स्विमसुट कम्पनीलाई ट्याग गरेर ट्विटरमा फोटो अपलोड गरिन् । यो कुरा तत्काल भाइरल मात्र भएन, त्यसमा कम्पनीको ध्यानसमेत आकृष्ट भयो । कम्पनीले उनले लगाएको स्विमसुटको सूक्ष्म रूपमा निरीक्षण गरेपछि उनले स्विमसुटको तल्लो भागलाई माथि र माथिको भागलाई तल पारेर (उल्टो) लगाएका कारण यस्तो समस्या आएको जनायो । पुरा पढ्नुहोस्
रोपाइँका क्रममा फोहोर पानी, हिलो आदि रोपाहारको आँखामा पर्न सक्छ, जसले गर्दा आँखामा संक्रमण हुन्छ । यति बेला पानी पर्ने भएकाले घुम, छत्री आदि ओढेर धान रोपिन्छ । यद्यपि घुमले पनि आँखामा चोटपटक लगाउन सक्छ ।
लालगोपाल सुवेदी, जेष्ठ १८, २०७६
तिम्री श्रीमतीले मलाई प्रेम गर्न पाउनुपर्छ मैले तिम्री श्रीमतीसँग प्रेम गर्न पाउनुपर्छ मेरी सखिनीले जिन्दगीभर पति रुवाएकी हुन सक्छे
अक्षर काकाका नामले परिचित पत्रकार रामनाथ खनालको पहिलो कृति हो— देउती । यो पुस्तकमा पुरातन एवं आधुनिक समाजको चित्रण छ । नेपाली समाजमा हिजो र आज विद्यमान महिलाको स्थानलाई देउतीले छर्लङ्ग देखाएको छ ।
राजेन्द्र थापा, आश्विन १, २०७३
गफ त खुबै हाँक्दै हुनुहुन्छ देश हाँक्ने चैँ कैले निआमूल परिवर्तन भन्नुहुन्छ सिन्का भाँच्ने चैँ कैले निहाम्रा भित्ता र ढोकामा
नर्वेमा युरोपको पहिलो अन्डर वाटर रेस्टुराँसञ्चालनमा आएको छ । एक सय जना मानिसले एकसाथ लन्च वा डिनर गर्न सक्ने यो रेस्टुराँमा ४० जना मानिसले रात समेत बिताउन सक्ने व्यवस्था छ ।
ट्रेण्डिङमा सिन्धुको ‘चिटिक्कै भाछु रे’ ०१:०२ PM सगरमाथा म्युजिक अवार्डको दोस्रो संस्करणको आवेदन फारम खुल्यो १२:३० PM सुस्ताउँदै तीज गीत ११:४० AM विपद्सम्बन्धी जानकारीका लागि प्रविधिको प्रयोग १०:०० AM लैजा हावा भन्दै आए गायक सुगम पोखरेल ०९:०० AM क्यान विवाद अल्झाउनेहरूलाई अपराधी घोषित गर्छु ०८:०० AM उपाधिको हकदार इंग्ल्यान्ड श्रावण ५, २०७६, ०६:०० PM
थप लेख पढ्नको लागि
असार २७ देखि साउन २ गतेसम्मको राशिफलअसार २० देखि २६ गतेसम्मको राशिफल असार १३ देखि १९ गतेसम्मको राशिफलअसार ६ देखि १२ गतेसम्मको राशिफल
जोसँग पैसा हुन्छ उनीहरूसँग दिमाग हुँदैन ३१ वर्षमा २५ युवतीसँग रासलीलागोजिभरि पैसा नहुन्जेल लभ गर्न मन लाग्दैनमनोज गजुरेलको टिप्पणी सही हो
भूकम्पपीडितहरू सबैको नाममा खाता खोलिएको कुरा सुन्दा खुसी लाग्यो काठमाडौंको हावा निकै प्रदूषित छ कतिपय सरकारी कर्मचारी घूसबिना कामै गर्दैनन्भूकम्पप्रभावितहरूलाई बिर्सिएजस्तो छ
माया फुर्सदमा गरिने कुरा होइन बगिरहने पानीको गन्तव्य हुन्छएक छाक खानाकै बढी महत्वजुत्ता पाइन्छ भन्नु मिथ्या हो
अविवाहित कुमारहरूको राशीफलमा सन्तानसुख र पुत्र प्राप्ति लेख्या हुन्छभट्टीसम्म त हिंडेर जाने गर्‍या छु सम्बन्ध लभ यूबाट सुरु भएर विलिभ मी हुँदै लिभ मीमा गएर टुंगिदो रहेछपतिलाई उल्लू बनाउन सकिन्छ, तर उल्लूलाई पति बनाउन सकिंदैन
एसएलसी/एसईईको रिजल्ट आएको दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?एसईईपछि विदेश पढ्न जान नपाउने नियम कस्तो लाग्यो ?नेपाली सिनेमा भनेपछि किन नाक खुम्च्याइन्छ ? नेपाली सिनेमा भनेपछि किन मुख खुम्च्याइन्छ ?
अदालतमा छोडपत्र, घरमा सँगै0 अफ दि इयर म पनि प्रेगनेन्टबादल अब विवाहित
बिनिता बरालको ब्लोअप प्रतिक्रियानवाङ र बिञ्जुको ब्लोअप प्रतिक्रियाअनमोल केसीको ब्लोअप प्रतिक्रियारेखा थापाको ब्लोअप प्रतिक्रिया
रूख पनि फ्यानयस्तो पनि रेस्टुराँएउटा परेवाको मूल्य १ करोड ५ लाखकीराबाट पाउरोटी
अग्ला पुललाटोकोसेरोलाटोकोसेरोओलम्पिक पदकमा सुन हुन्छ
लण्डनमा देखियो अनमोलको क्रेजपहिलो कान्तिपुर कनक्लेभ मेरो गाउँ मेरो ठाउँ भिडियो प्रतियोगिता शुरुकलिउड नाइटमा सरोज खनाल
दर्शक कमेडीबाट अघाएका छैनन् प्रधानमन्त्रीदेखि राजासम्म कलाकारको सिकारन्यू जेनेरेसनका कमेडियन म पनि रमाइलो गरिरहन्छु
अमेरिकामा तीज यसरी मनाइन्छहङकङमा तीजको रौनकयुट्युबमा हिट तीज गीत तीज गीतमा हास्य कलाकारको भीड
अभिनेत्रीहरूको स्कोरकार्डअसफल स्टार वर्षका उत्कृष्ट पहिरनफल्प अफ दि इयर